घरमै डाक्टर : जाडोमा हिटर वा आगो बालेर सुत्दा किन जान्छ ज्यान? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
घरमै डाक्टर : जाडोमा हिटर वा आगो बालेर सुत्दा किन जान्छ ज्यान?
सोमबार, पुस २१, २०७६, ०७:००:००
प्रश्न : जाडोमा हिटर वा आगो बालेर सुत्दा ज्यान जाने खतरा रहन्छ भन्छन् किन होला? के कारणले जान्छ ज्यान?
डा सूर्य पराजुलीको उत्तर :
मुख्यतया जाडो महिनामा हावाको आदानप्रदान कम हुने घर वा कोठामा यो समस्या देखिन्छ । कार्बन मोनोअक्साइडले रगतमा रहेको हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजनलाई हटाइदिन्छ, जसको कारण कोषमा हुने आन्तरिक श्वासप्रश्वाश प्रक्रिया बन्द हुन जान्छ र मुटुमा पनि प्रत्यक्ष हानी गर्छ।
कार्बन मोनोअक्साइड बिषाक्त रासायनिक ग्यास हो। यसमा कार्वन (सी) र अक्सिजन (ओ) मिसिएको हुन्छ। आगो बालेर बन्द गरिएको कोठामा शुद्ध हावाको प्रसार हुन पाउँदैन र कोठाभित्र अक्सिजन कम हँुदै जान्छ । अक्सिजन कम हुनेबित्तिकै कार्वनको एक परमाणुले अक्सिजनको दुई भाग परमाणु लिएर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरु गर्छ र कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास बनाउँछ। यो ग्याँस हावाभन्दा ३ गुणा हलुको हुन्छ । यसको मुख्य स्रोतहरुमा दाउराको आगो, गाडीको इन्जिन, ग्यास, तेल, कोइला, पेट्रोल, स्टोभ आदि हुन्।
हेमोग्लोबिनमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गएमा चक्कर लाग्ने, वाकवाक लाग्ने, मन्द टाउको दुख्ने, कमजोरीपन, उल्टी हुने, आँखा धमिलो हुँदै जाने , छिटोछिटो श्वासको गति बढ्ने, मुटुको धड्कन बढ्दै जाने, जीउ काम्न थाल्ने, बेहोस अथवा अर्धचेत हुने हुन्छ । समयमै थाहा नपाए यही कारणले नै मानिसको मृत्यु हुन्छ।
डा सूर्य पराजुली, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो? होइन। सञ्चो दलिएको वा कुनै पर्फ्यूम वा बडी स्प्रे लगाइएको मास्क लगाउँदा त्यसले रुघा लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छैन। प्रयोग गरिने मास्क सुख्खा र सफा हुनुपर्दछ १७ घण्टा पहिले
के अब आउने कोभिड-१९ को लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन्? हालसम्म भएका अध्ययनहरुले कोभिड-१९ को खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने जोखिम निकै कम हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका छन्। मंगलबार, साउन १२, २०७८
किन पर्छ बच्चा जन्मदै मुटुमा प्वाल? गर्भमा ३ महिना पुग्दा नपुग्दै बालकको मुटुको निर्माण भैसकेको हुन्छ। शिशुको विकासको प्रथम ३ महिनाभित्र कुनै कारणले मुटुको विकासमा गडबडी भएमा बालकलाई जन्मजात मुटुरोगी बनाउँछ। मंगलबार, साउन ५, २०७८
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा ४१ वर्षपछि अवकाश, अब एमफिलको धोको १ घण्टा पहिले
कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्ने तयारी तत्काल सुरु गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन १२ घण्टा पहिले
होटलबाट २२० डोज खोपसहित स्वास्थ्यकर्मी नियन्त्रणमा १२ घण्टा पहिले
फार्मेसी धनी फरार भएपछि आफ्नो लाइसेन्स निकाल्न विभाग धाउँदै समीर १५ घण्टा पहिले
बिपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षले पूर्वमन्त्री तथा दलका नेतासँग गरे छलफल १५ घण्टा पहिले